कोरोना निको भई घर फर्कने ५ जना काे–काे हुन् ? – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
कोरोना निको भई घर फर्कने ५ जना काे–काे हुन् ?
होलिस्टिक संवाददाता ९ वैशाख, २०७७
धनगढी उपमहानगरपालिका– ५, कैलालीका ३४ वर्षीय युवक अस्पताल भर्ना भएको २८ औं दिनमा निको भएर मंगलबार साँझ घर फर्किएका छन् । उनी घर गएसँगै निकाे हुने काेराेना संक्रमितकाे संख्या ५ पुगेकाे छ । चैत ११ मा सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएका उनमा चैत १४ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
नेपालमै पहिलो संक्रमितका रूपमा चीनबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थी पहिल्यै निको भइसकेका थिए । त्यसपछि दोस्रो संक्रमित रहेकी काठमाडौंकी १९ वर्षीया किशोरी प्रशिद्धि श्रेष्ठ र चौथो संक्रमित रहेकी बागलुङकी ६५ वर्षीया महिला तथा अर्का कैलालीका युवक समेत यसअघि नै निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।